राजेन्द्र महतोले संसद वैठकमा हिन्दी बोलेपछि सामाजिक सञ्जालमा ब्यापक बिरोध र गालीगलौज (भिडीयोसहित) — Sanchar Kendra
राजेन्द्र महतोले संसद वैठकमा हिन्दी बोलेपछि सामाजिक सञ्जालमा ब्यापक बिरोध र गालीगलौज (भिडीयोसहित)
सोमबारबाट सुरु भएको संघीय संसद् बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने चौथो ठूलो दलको हैसियतमा राजपाका नेता राजेन्द्र महतोले हिन्दीमा सम्बोधन गरेपछि चौतर्फी बिरोध सुरु भएको छ ।
मंगलबार,नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सम्बोधनपछि बोलेका महतोले संसदमा हिन्दी भाषा प्रयोग गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उनको कडा आलोचना भइरहेको छ ।
हिन्दीभन्दा बरु मैथली भाषामा सम्बोधन गर्न उपयुक्त हुने उनीहरुको सुझाव छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले के राजेन्द्र हमतोको मातृभाषा हिन्दी नै हो त ? भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् ।
तर महतोले सम्बोधनका क्रममा हिन्दी भाषा प्रयोग गरे पनि सबैको भावनालाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्न वाम गठबन्धनका नेताहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
संसद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महतोले जनताले वाम गठबन्धनलाई ठूलो दल बनाएको भन्दै मन ठूलो बनाउन केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई आग्रह गरे ।
‘प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डजीलाई बधाई दिन चाहन्छु, जनताले अध्यधिक समर्थन दिएका छन्’ उनले भने, ‘जनताले ठूलो पार्टी बनाएका छन् । अब मन ठूलो बनाउनुस्, देश बनाउनुस् ।’
हिन्दीमा सम्बोधन गरेका महतोले सबैको पहिचान र भावनाको सम्बोधन हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘नेपालीका साथै मधेसी पनि हौं । धोती हाम्रो संस्कृति हो, यसमा गर्व छ ।’ अरु नेपालीलाई जत्ति मातृभूमिको माया छ, मधेसीहरुलाई पनि त्यति नै माया रहेको उनले बताए ।
‘यो देश कुनै भाषा, जाति वा धर्मको होइन, सबैको देश हो’ महतोले भने, ‘प्रचण्डजीले ठीक भन्नुभयो, यो विवाद बढाउने समय होइन । सिंहदरबारले अरु जनता के चाहन्छन्, त्यो बुझे समस्या हुँदैन ।’
महताेले कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई तत्काल रिहा गरी संसदमा आउने वातावरण बनाउन माग गरे ।
‘कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट जनताको अपार माया र मतले निर्वाचित रेशम चौधरी यो संसदमा हुनैपर्छ,’ महतोले भने, ‘कसैलाई कुनै आरोप लाग्नसक्छ, आरोप लाग्दैमा कोही अपराधी हुँदैन ।’ उनले चौधरीलाई संसदमा ल्याउने वातावरण बनाउन सरकार र संसद सचिवालयलाई आग्रह गरे ।
टीकापुर घटनाको मुख्य दोषी रहेको आरोप लागेका चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलालीले पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरेको छ । दुई वर्षअघि कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ सुरक्षाकर्मी र १ नाबालकको हत्या भएको थियो ।
के भने नेपालले ?
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले विपक्षीलाई रचनात्मक सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। मंगलबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेकपा एमालेको तर्फबाट बोल्दै नेपालले धारणा राखेका थिए।
‘सरकारलाई हनिमुन पिरियड मनाउन नदिने’ भनेर देउवाले सोमबार दिएको अभिव्यक्तिप्रति नेता नेपालले भने, ‘रचनात्मक प्रतिपक्षको अपेक्षा छ। तर हनिमुन पनि मनाउन दिन्नौं भन्ने हो भने परिणाम आफैंले भोग्नुपर्छ।’
उनले वाम शक्तिको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी आएको पनि बताए। ‘वाम शक्ति आउँदैमा आत्तिनु पर्दैन’, नेपालले भने, ‘अधिनायकवाद लाद्छ कि चुनाव नै हुन दिँदैन कि भन्ने सोच्नु जरुरी छैन।’ नेपालले सरकारले सुशासन र न्यायको प्रत्याभूति दिनुपर्ने पनि बताए। झण्डै दुई तिहाइको सरकार बन्न लागेको भए पनि अहंकार राख्ने कुरा नभएको नेपालले बताए।
प्रचण्डले के भने ?
व्यवस्थापिका संसदमा सम्बोधन गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मुलुकका लागि भ्रष्ट र ठगलाई ठेगान नलगाएसम्म मुलुक र जनताको हित नहुने भएकाले त्यसैअनुसार नीति नियम बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । उनले के-के भने ? बुँदागतरुपमा हेर्नुहोस्
–संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुरा निकै ठुलो चुनौति थियो । तर, दलहरुको सहमतिबाटै समावेशी र समानुपातिक संविधान घोषणा गर्न सफल भयौ ।
–संविधान घोषणापछि कार्यन्वयनपनि चुनौतिपुर्ण थियो तर, कार्यन्वयनमा पनि हामी सवै एक ठाउमा सहमत भयौ र यहाँसम्म आइपुग्न सफल भयौ ।
–अब हाम्रा अगाडि फेरि एउटा चुनौति छ । स्थायीत्व, विकास र समृद्धिको जनताको आकांक्षा छ त्यसलाई पुरा गर्ने काम प्रधानमन्त्री केपी ओलीको काँधमा आएको छ त्यसका लागि उहालाई शुभकामना छ ।
–संविधान जनताको भावना,औचित्यका आधारमा संशेधन गर्न सकिन्छ । अव विद्रोह गर्नुपर्ने अवाश्यक्ता छैन । संविधानबाटै असन्तुष्टि र मागहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छ । अवको चुनौति स्थायीत्व, सम्बृद्धिका लागि लड्न आवाश्यक छ । अहिलेका कर्मचारी, न्यायलय, राजनीतिक दलहरु, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय पुरानै ढर्राका छन् तिनलाई समयानुकुल बनाउनुपर्छ ।
–जनताले जसरी अभिमत प्रकट गरे । मैले दोस्रो पटक प्रधानमनत्रीको जिम्मेवारी पाउदै गर्दा मधेसमा केही समस्या थियो । तर, हामीले उहाँहरुको भावनालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्यौ । त्यसको परिणाम स्थानीय तहको चुनावमा देखियो ।
–राजनीतिक इच्छाशक्ति भयो भने साच्चै कठिन काम गर्न सकिदोरहेछ भन्ने महशुस भयो । माओवादी जहिले पनि केन्द्रविन्दुमै पर्ने गर्छ । म संसदमा बोल्ने बेलामा पनि मध्यभागमै परे । म अघि दुई जनाले बोल्नुभयो म पछि दुई जनाले बोल्नुभयो । हामी अव राष्ट्र र जनताका निम्ती जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार छौ भनेर प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुपर्छ ।
–हामी हिजोका जसरी पदका लागि मरिहत्ते गर्दैनौ भनेर संकल्प गर्न सके केही बर्षभित्रै मुलुकलाई आर्थिक प्रगतिमा फड्को मार्न सकिन्छ । गुणात्मक रुपमै अघि बढ्न सकिन्छ तर संकल्प जरुरी छ । यहि नयाँ नेपाल बनाउने र बेथितिको अन्त्य गर्ने यहि अवसर हो, एक हातले मात्रै तालि बज्दैन एक हातले मात्रै ताली बज्छ भनियो भने त्यो गलत हुन्छ ।
–सुशासन, हाम्रो काम गर्ने तरिका बदल्न जरुरी छ । भ्रष्टचार अत्याधिक बढेको छ । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिएन भने सरकार असफल हुन्छ । भ्रष्ट र ठगलाई दण्ड र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ विनभेदभाव ।
–छिमेकीसँग हाम्रो सम्बन्ध आफ्नै किसिमको हुन्छ । हामी कतैतिर पनि ढल्कदैनौ । बाम गठबन्धन अव धेरै दिन रहदैन । केही दिनमै एउटै पार्टी बन्छ । राष्ट्रिय मुद्धामा रचनात्मक सहयोग गरेर प्रतिपक्षलाई पनि सँगै लिएर अघि बढ्न तयार छौ ।
प्रचण्ड, महतो र उपेन्द्र यादवको सम्बोधन भिडियोमा हेर्नुहोस् ।